iTunes Radio yakabhadhara Apple Music | Ndinobva mac
iTunes Radio ichave yega kubhadhara vashandisi veApple Music
Zvinotaridza kuti Apple ichakurumidza kugadzirisa sevhizheni yemahemesheni yainayo muTunes, iTunesRadio. Iyi ndeimwe yeaya mashoko kuti vamwe vashandisi vanga vachitotarisira kana iyo mimhanzi yekushambadzira, Apple Music, yatanga, ikozvino mushure menguva iyo sevhisi yakashanda mahara, inozove sevhisi inobhadharwa yakabatanidzwa muApple Music.
Iyo kambani pachayo yakasimbisa iyi nhau kuburikidza nesitatimendi uye ikozvino kutepfenyurwa kweaya mahedhiyo mahedhiyo kuchaenda kutepfenyurwa kune vashandisi vakanyoresa kuApple Music kubva Chishanu chinotevera, Ndira 29, rinova zuva ravachatanga kubuda zvishoma nezvishoma kubva kuTunes Radio.
Ko kana ichizoramba yakangofanana kusvika pari zvino iri Beats 1 sevhisi, iyo yaizoenderera ichitepfenyura maawa makumi maviri nemana uye muvhiki rese. Iyi redhiyo sevhisi icharamba yakasununguka zvachose kune vashandisikunyangwe kana uine Apple Music kunyorera.
Chokwadi ndechekuti mune yangu pachezvangu handikwanise kutaura kuti ndinofarira iyo Beats 1 redhiyo sevhisi kubva kuApple Music sezvo ini ndaisamboishandisa pakutanga, saka handigone kuenzanisa kana sevhisi iri nani pane imwe. Chandinogona kutaura ndechekuti makomendi ayo anogona kuverengwa pamambure nezve Apple Music radio, Beats 1, haana kunaka kwazvo. Zviripachena iyi sevhisi iri nani kwazvo kune vashandisi veUS sezvo ivo vachiparadzira zvese muChirungu uye maartist anoonekwa anowanzozivikanwa zviri nani ipapo kupfuura pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » iTunes Radio ichave yega kubhadhara vashandisi veApple Music
Maitiro ekugadzirisa mabhuku ako kuverenga muBooks
Microsoft inotitengera iyo Apple Watch kana tichida Bhendi 2